ड्युटीमा खटिएका २ प्रहरी अधिकारीको ह’त्या गर्ने ७ जना कैलालीबाट पक्राउ, खुल्यो यस्तो रहस्य — Imandarmedia.com
१कालीकोटकी यी सुन्दर युवतीसँग विवाह गर्दै रमेश प्रसाई, निमन्त्रणा कार्ड बन्यो भाइरल
२कर्मचारी भर्नामा गाउँपालिका अध्यक्षले घुस खाएको भन्दै उपाध्यक्षले गरिन तालाबन्दी
३आज पनि थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? थप विवरणसहित
४ओलीलाई कसले दियो सुरक्षा थ्रेट ? गृहको यस्तो रिर्पोटिङ गरेपछि चाले कडा कदम
५धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने
६आज फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
७कोरोना महामारीलाई लिएर विश्वमा भयो अर्को डरलाग्दो पुष्टि, अब के हुन्छ ?
८काठमाडौंका यी स्थानमा आज दिनभर बिजुली नआउने
९रोजगारीका लागि बिदेश जान चाहानेहरुलाई खुसीको खबर, तर पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो नियम
१०नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, प्रचण्डलाई बहुमत आउने निश्चित भएपछि यस्तो छ ओली समुहको तयारी
११राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन ? के हो खास रहस्य
१२डिप्रेसन कसरी हुन्छ ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय
१US Election 2020: Biden overtakes Trump in Pennsylvania as Georgia heads for recount
२Melbourne Cup 2020: Twilight Payment wins but Anthony Van Dyck is fatally injured
३कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने, शरीरमा आउने अनावश्यक रौंलाई याद गर्नुस् यी ५ कुरामा
४US Election 2020: Republicans and Democrats battle for control of Congress
५आज तिहारको चौथो दिन गाई-गोरु र हलीको पूजा गरिँदै,म्हपूजा पनि आजै
६Covid threatens to ground India’s aviation industry
७खुला मञ्‍चमा गरिबलाई खाना खुवाउन रोक लगाउने महानगरको निर्णयप्रति साझा पार्टीको विरोध
८यस्तो छ विश्वकै पहिलो उड्ने कार, जान्नुहोस् मूल्य र अन्य जानकारी
९“We are going to win”, Biden say on US Election asalead widens
१०शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बोर्ड बैठकले ग्रेडिङको त्रुटि सच्यायाे ? राजवंशी बी ग्रेडमा
११गोकुल बास्कोटाको ७० करोड काण्डमा मुछिए प्रधानमन्त्री ओली !
१२कोरोना संक्रमित बढेसँगै फेरि दिल्लीमा फेरि लकडाउन
ड्युटीमा खटिएका २ प्रहरी अधिकारीको ह’त्या गर्ने ७ जना कैलालीबाट पक्राउ, खुल्यो यस्तो रहस्य
काठमाडौं । कैलालीको अस्थायी प्रहरी बिट, जुगेडाका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको ह’त्यामा संलग्न ७ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले घटनामा संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै धनगढी–१० का ३१ वर्षीय पर्कु भन्ने रोहित राना, २० वर्षीय राजेन्द्र राना, ३० वर्षीय चोर भन्ने सुरेश राना, २५ वर्षीय गब्बर भन्ने राजकुमार राना, २२ वर्षीय राम निवास राना, २९ वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राना र २५ वर्षीय राम गोपाल रानालाई सार्वजनिक गरेको हो ।
उनीहरुलाई प्रहरी सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो । प्रारम्भमा १३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिए पनि ७ जनाको मात्र संलग्नता पुष्टि भएको हो । उनीहरुले असई विकले मटर तस्करीमा अवरोध गर्न खोजेपछि ह’त्या गरेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
शनिबार राति बा ५८ प ५२८४ नम्बरको मोटरसाइकलमा गस्तीका लागि गएका वेला असई विक र जवान साउद तस्कर समूहको निशानामा परेका थिए । विकको शव आइतबार मोहना नदीमा भेटिएको थियो भने साउदको भेटिएको थिएन ।
सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले खोज्दा पनि शव नभेटिइरहेका वेला पक्राउ परेका अभियुक्तले दुवैको ह’त्या स्वीकारेपछि खोजीलाई थप साँघुरो बनाइएको थियो । यसक्रममा विकको शव भेटिएको स्थानबाट २ सय मिटर उत्तर–पूर्वतर्फ मंगलबार साउद भेटिएका थिए ।
जमिनबाट करिब आधा फिट बालुवामा गाडिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको एसएसपी मुकेश सिंहको भनाइ छ । जवान साउदको टाउकोमा लाठी र गर्धनमा फरुवाको जस्तो चोट देखिएको छ । असई विकको हराएको पेस्तोल र मोबाइल पनि नजिकै भेटिएको छ ।
को हुन् असई विक?
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ सुकुम्बासी बस्तीमा जन्मेका २८ वर्षीय विक पढाइमा अब्बल थिए। एसएलसी पास गरेपछि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर उनले प्लस टु र स्नातक गरेका थिए। ७ वर्षको छँदा उनका बुवा बिते। आमाले ज्याला मजदुरी गरेर घर चलाउँथिन्।
‘आमाको दुःख देखेका कारण परिवारप्रति उत्तरदायित्व छ भन्ने भाव उहाँमा थियो,’ उनका भाइ पवन विक भन्छन्, ‘सँगसँगै देश र जनताको निम्ति काम गर्ने मनोकांक्षा पनि।’ असई विक जन्म दिने आमा र मातृभूमिलाई ‘राम्रो’ बनाएर राख्छु भन्ने गर्थे।
असई विकले २०७३ सालमा दीपायलबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नाम निकालेका थिए। १४ महिनाको तालिमपछि उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित आग्री प्रहरी चौकीमा खटिए। त्यहाँ १८ महिना काम गरे। विक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा ८ दिन बसेपछि तीन महिनाअघि अस्थायी प्रहरी चौकी जुगेडाको इन्चार्ज भएर गएका थिए।
जागिर खानुअघि नै उनको बिहे भइसकेको थियो। उनको बिहे भएको १० वर्ष भएको छ। उनका दुई छोरी ५ र ३ वर्षका छन्। उनी इमान्दार थिए। प्रहरीमा इमान देखाउँदै उनी प्रहरी निरीक्षक बन्न चाहन्थे। प्रहरी निरीक्षकका लागि काठमाडौंमा शरीरिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराएर असोज ६ गते उनी धनगढी फर्केका थिए। उनी शारीरिक र स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भइसकेका थिए।
असई विक घरपरिवारसँग १५ दिनअघि मात्र भेटघाट गरी फर्केका थिए। उनी हप्तामा एकपटक धनगढीमा डेरा गरी बसेकी श्रीमती र छोरीलाई भेट्न जाने गरेका थिए। श्रीमती बिरामी भएका कारण उपचारका लागि धनगढीमा डेरा गरी बस्थिन्। ‘हामी सबैलाई आड दिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, दाइ हाम्रो भरोसा हुनुहुन्थ्यो,’ भाइ पवनले भने।
सोमबार साँझ उनको पुनर्वास नगरपालिका–९ मै पर्ने दोदा नदीमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। उनको पार्थिव शरीरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी सुवेदीले नेपाल प्रहरीको झण्डा ओढाएर अन्तिम सम्मान व्यक्त गरे। प्रहरीमा सेवा गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका उनको परिवारलाई अमर प्रहरीको परिवारका हैसियतले संगठनले मूल्यांकन गर्ने सुवेदीले बताए।
काे हुन् रामबहादुर साउद ?
जवान साउँद अछामको बान्नगढी जयगढ गाउँपालिका-५ घरका रामबहादुर घरका साइला छोरा हुन्। उनका कान्छा भाइ नेपाली सेनामा छन्। एक भाइले सीएमए पढेर घरमै लोक सेवाको तयारी गरिरहेका छन्। उनीभन्दा अगाडिका दाइ गंग आधारभूत विद्यालयका शिक्षक हुन्।
घरमा बुबा र आमाले खेती किसानी गर्छन्। रामबहादुर सानैदेखि शारिरीक कसरतमा अब्बल थिए। उनी फुर्तिला र जोसिला थिए। दौड, जम्पिङ, ज्याम्नेस्टिकमा उनी स्कुलमा पहिलो हुन्थे। गंगका अनुसार सानैदेखि फोर्समा जाने उनको सपना थियो। कक्षा १२ पास गरेपछि उनले दिपायलमा प्रहरी हुन आवेदन दिएका थिए।
त्यसबेला उनी छनोटमा परेनन्। प्रहरी बन्ने उनको सपना यति जब्बर थियो कि त्यसपछि गरी पाँच पटक छनौट नहुँदा पनि उनले हिम्मत हारेनन्। ‘सपना नै थियो प्रहरी हुने, छैठौं पटक २०६७ मा नाम निकालेको हो,’ गंगले भने। छनौटपछि उनले ९ महिना डोटी बुडरमा तालिम लिए। तालिमपछि दिपायलमै काम गरे। त्यसपछि दार्चुला सरूवा भए। २ वर्षदेखि जुगेडा अस्थायी प्रहरी चौकीमा थिए।
जागीर खाएको २ वर्षपछि उनको बिहे भयो। श्रीमती घरयासी काम गर्छिन्। उनका दुई छोरी छन्। ‘साथीहरूले इन्डिया जाउँ भन्दा उसले म देशको लागी काम गर्छु भन्थ्यो,’ गंगले भने। १० वर्षको जागिरले उनको परिवारको घरखर्च चलेको थियो। अलिकति पैसा जम्मा गरेर धनगढीमा घर बनाउने उनको इच्छा थियो।
‘छोरीलाई धेरै पढाउने उसको सोच थियो,’ गंगले भने। पछिल्लो पटक भदौमा उनी घर गएका थिए। १० दिन घरमा बसे। यसबेला साथीभाइ आफन्तसँग भेटघाट पनि गरे। घटना भएको दिन उनका कान्छो भाइ काठमाडौंबाट घर आएका थिए। रामले धनगढीबाट सामान किनेर घरका लागि भाइको हातमा पठाएका थिए।
दिउँसो कान्छी छोरीसँग फोनमा कुरा भयो। गंग आइतबार खेतमा भट्मास काट्दै थिए। ‘धनगढीमा असइको ह’त्या भयो र राम बहादुर बेपत्ता छन्’ भन्ने खबर सुने। ‘त्यसैबेला मलाई लागिसकेको थियो, ऊ पनि बाँचेन होला,’ उनले भने।
घरमा खाना खाने समय थियो। सबैले खाएपछि बल्ल उनले सुनाए। आफन्त र गाउँले पनि घरमा आए। केहीले धनगढी जाउँ भन्ने सुझाव दिएपछि गंग हिँडे। सोमबार धनगढी पुगेर घटनस्थलमै खोजीमा लागे। करिब ६० घन्टा बिते पनि भाइ भेटिएन।
‘भाइ नभेटिएपछि कतिले रामले असई मा’र्‍यो भनेको सुनेपछि निकै मन दुख्यो,’ उनले भने। असईसाब् र आफ्नो भाइले देशको सेवा गदैगर्दा ज्यान गुमाउनु परेकोमा गर्व लागेको उनको भनाइ छ। ‘बर्दीमै प्राण त्याग्यो, यसमा मलाई गर्व लागेको छ,’ उनले भने।
उनी फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने चाहन्छन्। हत्यारा पनि पत्ता लागेका छन्। कोही दोषी नउम्कियोस् भन्ने उनलाई लागेको छ। साउदको शव अहिले पोष्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशीक अस्पतालमा राखिएको छ। आजै शव अछाम लैजाने परिवारका सदस्यले बताए। बुधबार उनको अन्तिम संस्कार हुनेछ।
कालीकोटकी यी सुन्दर युवतीसँग विवाह गर्दै रमेश प्रसाई, निमन्त्रणा कार्ड बन्यो भाइरल
कर्मचारी भर्नामा गाउँपालिका अध्यक्षले घुस खाएको भन्दै उपाध्यक्षले गरिन तालाबन्दी
आज पनि थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? थप विवरणसहित
काठमाडौंका यी स्थानमा आज दिनभर बिजुली नआउने
रोजगारीका लागि बिदेश जान चाहानेहरुलाई खुसीको खबर, तर पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो नियम
अछामबाट धनगढीतर्फ आउदै गरेको बस दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिको विवरणसहित
पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सञ्चारमन्त्रीकाे प्रतिवद्धता
कस्तो छ आजको मौसम ? काठमाडाैंमा घाम लाग्छ कि लाग्दैन ?
देशभर आज एकसाथ ४०३ अस्पतालकाे शिलान्यास हुँदै
शिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाइँदै